Yekupedzisira Holiday Email Kushambadzira Nongedzo Infographic | Martech Zone
Yekupedzisira Holiday Email Kushambadzira Nongedzo Infographic
Chitatu, December 7, 2016 China, Gunyana 24, 2020 Jenn Lisak Golding
Ndiwo mwaka wekushambadzira pazororo, uye wedu email ongororo software anotsigira NeverBounce akagadzira iyo yekupedzisira yezororo email yekushambadzira gwaro nekuda kwekunakidzwa kwako kwekuona.
The Dhata reNational Retail Federation ramba uchiratidza kuti kushandisa mari kuri kukwira gore rino, kunyanya pamhepo uye kunotungamirwa nedhijitari. Email kushambadzira inonyanya kutamba chikamu chakakura, uye vatengesi vanofanirwa kugara pamusoro pekuchengetedza zvinyorwa zvavo zvakachena uye zvitsva kuchengetedza mukurumbira wavo wekutumira uye kugona.
Mamwe matanho anoshamisa emwaka wezororo wa2016:
92% yevatengi vezororo tenga pamhepo.
The inofungidzirwa kuwedzera mune isiri-chitoro kutengesa yegore rino rezororo i7 - 10%.
27.3% yemirairo inotungamirwa nekutengesa email paChishanu Chishanu.
41% yevashambadziri vepaIndaneti tenga kubva kumutengesi mutsva.
Pakazara, huwandu huri kuramba huchiwedzera munzvimbo yepamhepo, inova nhau huru kune vatengesi.
Wepamusoro Email Kushambadzira Mazuva Iwe Haufanire Kupotsa
Kunyangwe Chishanu Chishanu neCyber ​​Muvhuro zvauya zvikapfuura, kuchine mari yakawanda yekuita muna Zvita. Codeless Inopindirana chaizvo yakaiswa pamwechete yakakura pamusoro email mazuva anotungamira yenguva yezororo, iyo inopaza nguva yega yega yemari kuita machunks:
Mbudzi / Yekutenda Chunk
Mazuva maviri pamberi paKutenda
Zuva Mushure Kokutenda
Cyber ​​Muvhuro Chunk
Mazuva maviri mushure meCyber ​​Muvhuro
Green Muvhuro Chunk
Green Muvhuro (2 Muvhuro muna Zvita kana Muvhuro wekupedzisira aine angangoita mazuva gumi pamberi peKisimusi)
1 Zuva mushure meGreen Muvhuro
3 Mazuva mushure meGreen Muvhuro
7 Mazuva mushure meGreen Muvhuro
Wakamboona chero rimwe zuva riine huwandu hwakanyanya hwebudiriro mumwaka wezororo?
Ita Emails Eko Kuwedzere Kufadza
Kutumira maemail ako kunze kwemazuva chaiwo chinhu chimwe chete; kuve nechokwadi chekuti vari kukwezva inyaya imwe nyaya.
NeverBounce inopa mamwe matipi makuru eku "gadzira yako maemail nekutengesa":
Ita shuwa kuti chiitiko chakakwenenzverwa nharembozha zvakare. Iite iyo isina musono ruzivo rwekutenga kune chero mhando ye shopper.
Iva nemanzwiro munguva ino yezororo; usatya kudhonza iwo matambo emoyo.
Email ne social play kubva kune mumwe nemumwe. Iko mameseji anoenderana here uye urikusashandisa iwo kusimudzira imwe?
Chikamu chevashandisi zvinobudirira! Izvi zvakakosha kwazvo kuona yakakwira kudzvanya-kuburikidza uye kuvhura mitengo.
Nguva zvinhu zvese. Simbisa iwo mazwi ekutumira uye sarudzo kuti vanyore kuti vatenge nekukurumidza uye kazhinji.
Sanganisira inowirirana mafoni kune zviito mukati meiyo email. Udza mushandisi zvekuita.
Edza, natsa, dzokorora. Email kushambadzira haina kukodzera kuita kana usiri kuyera mhedzisiro kuti uone zviri kushanda uye zvisiri.
Gara pane Vanyori Vako 'Nice Chinyorwa
Chatinonyanya kuda nezve NeverBounce ndeye yavo yekutendesa email, iyo yatinoshandisa mukati medu kune vedu vatengi uye vatinoshanda navo Yadzo # 1 zano kune chero ezororo email email ino mwaka ndeyekuchengetedza iwe zvinyorwa zvakachena! Uye nechikonzero chakanaka.
Gara pane yako vanyori 'yakanaka runyorwa nekuvhura yemahara account ne NeverBounce uye kuongorora yako runyorwa. Rondedzero yakachena inochengetedza iyo spam kure:
Saina Saina YeMahara NeverBounce Akaunti
Tags: 2016 email kushambadzira2016 maemailemail kushambadzira infographicongororo yeemailemail yekuongorora sevhisiemail email infographicemail email yezororoemail yezororo kushambadzira infographicmaemail ezororo
Matipi Ekuvandudza Yako Nhare mbozha App Kuzivikanwa Panguva Yezororo
Ipfupi Nhoroondo yeSocial Media Kushambadzira